बाँकेमा लकडाउन कहाँ छ ?
रामु ओली :
बाँकेमा कोरोना संक्रमणको दर , कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दर घट्नुको साटो बढिरहेको छ । दैनिक आकडामा वृद्धि भएको छ । समस्या दैनिक रुपमा बढिरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणको सुरुवाती दिनमा लापरबाही गरेको प्रशासन र स्थानियले कोरोना संक्रमणको दर बढे संगै लकडाउनको घोषणा गरे पनि लकडाउन बाँकेमा भने खोज्नु पर्ने अवस्था छ । कहाँ भिड छैन खोज्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
राज्य , स्थानीय प्रशासन, स्थानिय सरकार, जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध निकाय तपाईं हामी सबै लकडाउन कसरी फितलो पार्न सकिन्छ त्यता तर्फ मात्रै सोचिरहेका छौँ , सोची मात्रै रहेका छैनौ त्यसै अनुरुप लकडाउनको अवज्ञा गर्दै छौं ।
जब समाचार हेर्छौ, फेसबुक खोल्छौ , मुख सुख्खा पार्छौ , थुक घुटुक्कै निल्छौ , आँखा रातोपिर पार्छौ किनकी मेरो जिल्ला बाँकेमा दैनिक दर्जन मान्छे मरेका छन् । ५ सय बढी संक्रमीत दैनिक थपिएका छन् ।
अनि त्यसको एकै छिन पछि हामी बेफिक्री हुन्छौं , घुम्न निस्कन्छौ, कफि या चिया वा रक्सी भट्टिका आधा खुलेका सटरमा छिर्छौ, चोकचोकमा लखरलखर गर्छौ , प्रहरीको भ्यान संग लुकामारी गर्छौ, उ आउँछ दगुर्छौ , लुक्छौ, उ जान्छ फेरि सडकमा आउछौ , हल्ला गर्छौ , जमघट गर्छौ ।
हामी मात्रै होईन , प्रहरी पनि देखे पनि नदेखे झै गर्छ , गाडिमा आउछन् उस्तै गरि जान्छन् । मुड चले चोकमा रोकिन्छन् अनि लकडाउनलाई पलना गराए झै एक दुई जनालाई रोक्छन तर मात्र केही मिनेट त्यसपछि फेरि उस्तै ।
प्रशासनको झनै कुरै नगरौ उ हप्तामा एक चोटि सुचना जारी गर्छ, लकडाउन एकहप्ता थप्छ, अनि उ त्यही रातो-सेतो घरमै हराउछ । अनि मेरो जिल्लामा दैनिक मर्नेहरुको संख्या बढ्दै जान्छ ।
म फेसबुकमा लेख्छु बाँकेमा खै लकडाउन ? कति खुकुलो छ लकडाउन , किन कडा गरेन लकडाउन । म मात्रै होइन तपाइहरु धेरैले लेख्नु हुन्छ बाँकेमा खै लकडाउन ? कति खुकुलो छ लकडाउन , किन कडा गरेन लकडाउन ? तर त्यो लेखेर बाहिर लखरलखर म अनि तपाईं दुबै निस्कन्छौ । म अनि तपाईं नै प्रहरी संग लुकामारी गर्छौ । जुगाडको पास देखाउछौ, कामै नगरे पनि यी दिनमा अफिसको परिचय पत्र देखाउछौ र भन्छौ ,काममा हो ।
मेरो जिल्लामा संक्रमण मात्रै फैलिएको छैन , मृत्यु मात्रै बढेको छैन , मेरो जिल्लामा अराजकता समेत बढेको छ । फेसबुकमा त्रास मात्रै फैलिएको छ । त्रास बढे जसरी हाम्रो ज्ञान बढेन । लकडाउन बढे जसरी हाम्रो ब्यवहार भएन । लकडाउन त त्यो गरि खाने , निमुखाका लागि मात्रै रैछ । जो लकडाउ छ भनेर आफ्नो गरिबिलाई धिक्कारी रहेको छ ।
त्यसैले त म कहिलेकाहीँ खोज्छु नेपालगन्जमा लकडाउन कहाँ छ ? कहिलेकाहीँ टन्टलापुर घाम लागेको बेला मध्यान्हमा सुर्खेत रोडको बिचमा लकडाउन भेट्छु , कहिलेकाहीँ शहर भन्दा दुर खेतबारिमा लकडाउन भेट्छु । शहरको बजारमा लकडाउन छैन मेरो स्थानिय प्रशासन । शहरको त्यो भिड उस्तै छ हेर त त्यो रातो सेतो घरबाट बाहिर निस्केर । बजारका आधा सटर खुल्लै छन् मेरो प्रशासन तर देखिदैन त्यो सेतो रातो घरबाट । अनि फेरि अर्को हप्ता त्यही घरबाट लकडाउन थपेर सुचना निकाल्नु अनि म र म जस्ताले त्यो सुचना सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्छौ , समाचार लेख्छौ हतारहतार -” बाँकेमा पुन एक हप्ता लकडाउन थपियो ।”